Hanambady any Norvezy, manambady any Norvezy, hanambady ny norveziana - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Ny Pianakaviana firenena tarihan'ny Norvezy avy amin'ny herintaona occupy mitarika toerana isan-karazany filaharana ny kalitaon'ny fiainanaVahiny ny ankizivavy dia tsy mitsahatra mitady hanambady ny zavatra toy izany dia manome ny fahamarinan-toerana, ny firoboroboana eo amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny fiainany sy ny namana azo itokisana fa tsy handao sarotra minitra. Ny Norwegians, toy ny mahazatra nino? Fohy ny valiny dia Eny, izy ireo dia tena tsara toy ny mety hieritreritra ny iray. Ny ankamaroan'ny zavatra lehilahy tsara tarehy, ara-batana mandroso (noho ny hihaino ny fomba fitsaboana sy ny ny fampandrosoana ny fanatanjahan-tena ao amin'ny firenena) ary ny fanajana ny vehivavy. Ny toetra amam-panahy izy ireo, araka ny hoe:"tony, Tavaratra". Izy, toy ny rehetra Scandinavians, na dia eo aza ny fomba fijery, fa tsy maloka sy mahery, fa fotsiny ny mifanohitra amin'izany aza - tena ara-pihetseham-po. Ao Eoropa amin'ny Ankapobeny dia tsy nanaiky mba hanafina ny fihetseham-po, dia toetran'ny taorian'ny vanim-potoana Sovietika ny firenena. Toy izany koa ny Norwegians maro hafa Eoropeana na dia outdid: mba haneho ny fihetseham-po (na dia ny ranomaso) - panjakana any Norvezy dia tena tsy mahamenatra, ka tsy misy olona miezaka ny hitandrina ny tenany. Eo amin'ny fiompiana sy fambolena, ny Norwegians koa dia hanome mifanohitra maro zom-pirenena. Izy ireo dia tena undemanding araka ny tontolo iainana sy ny sakafo, dia tsy mitaky na inona na inona mihoatra ny natoraly. Ankoatra izany raharaha manodidina ny trano zavatra ny olona dia meekly no miaraka amin'ny vehivavy. Amin'ny Ankapobeny, ny Pianakaviana fiaraha-monina dia tsy misy ny fizarana ho ihany lahy na vavy kilasy, na ny enti-mody raharaham-barotra. Ny olona tsirairay tanteraka ny fiofanana mba hitarika ny fiainana, ary izy no lehibe sy namokatra iray Norwegians.
Ho an'ny fianakaviana fatana, izy, angamba, ary tsy mihatra manontolo, fa, araka ny efa nolazaiko, ny Scandinavians dia tena matanjaka sy ampiasaina mba ho afa-po amin'ny kely.
Na dia eo aza ny zava-misy fa ny ankamaroan'izy ireo dia mamela anao hanana be dia be.
Ny fanambadiana eo amin'ny fiainana ny zavatra milalao ny anjara asa manan-danja, tsy ny tena manokana ihany fa koa ara-tsosialy.
Ny hanambady any Norvezy - manan-kaja toerana ary, amin'ny tranga sasany, ny vadiny na dia mety ho lasa karazana nitranga teo aloha nikatona ny zava-nitranga. Fa mba hahatonga ny fifandraisana amin'ny fomba ofisialy Norwegians, toy ny fitsipika, tsy maika - tsy fahita firy mpivady hanambady alohan'ny amby roa-enina na fito amby roa-polo taona. Ankoatra izany, anjara toerana lehibe eo amin'ny fanambadiana dia mitaky ny tsara manatona ny safidy ny fiainana mpiara-miasa. Inona no liana, ary mendrika ny filazana manokana - ny toerana misy ny vahoaka miaina ao amin'ilay antsoina hoe"fanambadiana sivily". Any Norvezy izany dia mifanaraka amin'ny fomba fanao voasoratra ara-panjakana ny fanambadiana.
Ohatra, fanambadiana dia fifanarahana (amin'ny antsipirihany famaritana ny rehetra fa ny antoko tsirairay dia samy nitondra ho amin'ny fifandraisana), dia toy izany ny fianakaviana dia mihoatra noho ny mahazatra.
Amin'ny Ankapobeny, ny fanambadiana dia fifanarahana Norvezy - fantatra ny fomba fanao, dia tsy ilaina ny mihevitra azy ireo ho toy ny tsy fitokisana ny mpiara-miasa, na ny zavatra toy izany.
Araka ny efa voalaza, ny fanambadiana any Norvezy - ny tena zava-dehibe zava-nitranga, noho izany famaizana sy ny lalàna-maharitra Scandinavians tonga ho azy ny tena zava-dehibe.
Na izany aza, ny fisaraham-panambadiana ny olona ao amin'io firenena io dia loatra, be voina. Misaotra ireo rehetra ny fanambadiana fifanarahana, ny antoko matetika no tsy miombon-kevitra am-pilaminana. Ny zava-dehibe indrindra, ny zaza (raha) tsy nandao raha tsy misy fanohanana. Raha mitoetra eo amin'ny reny - ray raha tsy misy fanontaniana ny ankizy mandoa fanohanana, raha ny ray (izay, marihina fa dia matetika kokoa) amin'ny ankapobeny dia aleo ho rava. Ny Norwegians tia ny zanany. Satria Norvezy dia ny be sy ny maro ny toerana mba hidina na handeha, toy izany fivoahana ireo fandaharana tsy tapaka. Amin'ny tongotra any anaty ala, jono ao an-tendrombohitra - safidy maro. Ny fianakaviana lehibe tianay. Ho an'ny zazakely vao teraka, ny mpivady ihany koa ny fikarakarana miara - ny didim-panjakana mihatra amin'ny vadiny. Ny vehivavy dia afaka mifidy izay fotoana ny didim-panjakana izany dia ilaina.
Farafahakeliny fito volana ny fandoavana ny karama feno.
Avy eo dia nihena tsikelikely. Norvezy dia ny mitarika ny firenena eo amin'ny lafiny fiainana eto nandritra ny taona maro. Ny fifaninanana fotsiny eo amin'ny hafa-Pianakaviana States - Suède, Finlande, Iceland. Eto ny ambaratonga ambany indrindra ny heloka bevava, ny vidim-piainana sy ny tsy fananana asa. Ny teboka farany no zava-dehibe indrindra ho an'ny rehetra ny mety ho vadiny ny zavatra. Fa mafy aza manahy - mahita asa any Norvezy dia tena tsotra. Toy izany koa ny fampianarana ao an-toerana. Miasa andro any Norvezy dia fohy kokoa noho isika ao anatin'ny herinandro tokony hiasa tsy mihoatra ny fito amby telo-polo ora. Saika ny rehetra ny mponina dia mahafehy tsara ny teny anglisy, nefa ary ny zavatra mba hianatra mbola tsara.
Na dia tao Norvezy Dia mety indrindra dia hihaona maro mpiray tanindrazana, ny ankizivavy avy amin'ny firenena ny URSS tsy tapaka ny hifindra any Skandinavia.
Tamin'ny voalohany, ny mpitsidika dia tena gaga noho ny tsy fahampian'ny Norwegians nanaiky ankapobeny, dia toa izay ny fitsipiky ny fitondran-tena manoloana ny vehivavy: dinganina ny varavarana voalohany, manome ny tanana, mihazona ny kitapo mavesatra sy ny sisa. Fa io koa ny toe-tsaina, tsy mihoatra, ny fitovian-jo sy fotoana, no nahatonga ny zava-misy fa ny Norwegians fotsiny nitsahatra ny hahalala ireo hetsika ireo ho toy ny omena ary ankehitriny dia izany no heverina ho zavatra toy ny fihetsiketsehana ny fahalemen'ny vehivavy. Fa raha mangataka na manazava ny toe-tsaina amin'ny fanontaniana - assistance dia tsy azo lavina. Mba formalize ilaina ny fanambadiana antontan-taratasy any Norvezy no tena sarotra. Ao amin'ny isan-Paritra (administrative tarika ny Fanjakana, ny faritany) mety tsy hitovy, ny fitsipika momba ny fomba ny fanambadiana ny zavatra avy any ivelany ny vehivavy. Ny vadiny dia tsara ho fantatra mialoha. Aiza ny ankizivavy dia mety mila ny fahazoan-dàlana ny ampakarina (ny fandraisana, dia afaka miandry ny volana vitsivitsy), ary tany amin'ny toerana ampy ny mahazatra amin'ny fizahan-tany. Na ahoana na ahoana, dia mila ny fanasana.
Ary marina izany - mitondra ny anarana, dia tena sarotra
Avy amin'ny tahirin-kevitra afa-tsy ny pasipaoro, dia azo antoka fa mila kopia nahaterahana sy porofo ny fahazoan-dalana mba hanambady. Nadika sy panjakàna, mazava ho azy. Ho toy ny safidy iray - ny fanambadiana hisoratra anarana ao amin ny Fiangonana. Any Norvezy, ny Fiangonana dia tsy misaraka amin'ny fanjakana sy ny fanambadiana eto, dia manana izany hery ara-dalàna.
Ny Abbot koa azo antoka fa mitady ny antontan-taratasy, fa ny fomba afaka mandeha haingana raha tsy misy ny kely quibbles ny saro.
Tamin'ny fahatongavany tao Norvezy dia tsy maintsy hiaritra ny fisoratana anarana miaraka amin'ny polisy ao an-toerana. Tsy dia homena manokana maromaro izay dia mifatotra ny rehetra ny tolotra azo antoka sy nanome ny fanjakana: fiantohana, fampiofanana, ara-pahasalamana. Raha toa Ianao ka liana amin'ny lahy-Pianakaviana, ary, indrindra indrindra, te-hanambady any Norvezy, dia azo antoka fa Tsy maintsy amin'ny sokajin-taona rehetra. Toy ny isika efa niteny fa, ny ankamaroan'ny Norwegians, toy ny maro Eoropeana, dia aza maika ny hahita ny vadiny, tia ny voalohany mafy teo an-tongony. Ny mifanohitra ny toe-javatra, raha ny zavatra roa ny fahazoana nisara-panambadiana rehefa ela ny fifandraisana - koa tsy vitsy. Ao amin'ny farany ny Norwegians dimy amby telo-polo ny dimy amby efa-polo taona izy irery ihany no sisa amin'ny tena voafetra ny isan'ny fomba Fiarahana. Ary ny malaza indrindra dia ny Fiarahana an-tserasera. Ity fomba ity dia tombony ho an'ny olona rehetra noho ny fifadian-kanina ampy mamela anao ny ahi-dratsy na iza na iza no tsy matotra. Fa misy ny mahay manavaka. Indrisy anefa, ny ankamaroan ny efa misy toerana Fiarahana tsy manome ny fitsapana tahirin-kevitra fa ny mpampiasa dia mampiseho ny momba ny tenany. Azonao asaina hanao izany ny tenany. Ary izany dia afaka hitondra any amin'ny tsy misy dikany ho very ny fotoana sy ny selam-pitatitra. Raha ny fandehany fa ny hany fomba izay azo antoka fa mamela Anao hahazo ny fomba fijery amin'ny solontena toy izany avy lavitra sy ny vahiny firenena ho antsika araka ny Norvezy iraisam-pirenena ny fanambadiana Ny fahafahana misafidy. Any Kharkov ny lehibe indrindra toy ny orinasa antsoina hoe ary, ankoatra ny hafa, dia manolotra ny ankizivavy sy ny olom-pantatra sy ny Norwegians. Ny ohatra akaiky indrindra dia ny ankizivavy iray atao hoe Natalia, izay ihany rehefa dimy amby telo-polo ho zava-dehibe nanatona ny fanontaniana ny fitadiavana vady. Izy tsy mitady lehilahy iray manokana zom-pirenena, tsy manenjika tsara kokoa ny fiainana (soa ihany, izy nahazo izay ampy), fa fandavana vitsy loatra pushy hoy izy ny kandidà nanao safidy manohana ny mangina sy milamina ny zavatra Arnie. Ny olona dia variana tamin'ny Natalia tantara mikasika ny fianakaviana ary dia miara. Rehefa ny olona dia tonga ny fotoana mandeha, Natalie, tsy nisalasala nanaraka azy. Ankehitriny izy indray, afa-tsy ny hanomana ny antontan-taratasy feno-draharahan'ny mifindra any Trondheim. Ny tantaran'ny Natalia dia tsy manam-paharoa. Ao amin'ny amby roa-polo niteraka mihoatra noho ny zato ny mpivady. Lehilahy avy any Eoropa, Amerika latina, afovoany-Atsinanana firenena namela ny angon-drakitra tao amin'ny sampan-draharaha, satria tonga lafatra laza ny orinasa miteny ho ny tenanao. Ny angon-drakitra rehetra fa ny mpanjifa no tsiambaratelo, sy ny fidirana hahazo mendri-pitokisana kandidà. Asa rehetra dia tanteraka karama ho avy ny olona avy amin'ny tovovavy, ianao ihany no mila mameno ny mombamomba azy. Dia niverina taty aoriana, nilaza fa leo ka noho izany dia tsy te-handre ny fomba ny andro, aiza ianao, inona no nitranga ho anao, inona no manan-danja ary inona no tsy dia Momba ny maha-zava-dehibe ny fanohanana eo amin'ny fifandraisana, na dia tsy afaka miady hevitra tsy brainer, mba hanohanana ny tsirairay ny fitiavana ny olona mila fanampiana. Fa ny fomba hanaovana izany araka ny tokony ho izy ny sokina, Dia tsy afaka foana ny masonao, eny ny lamba ny ny finday. Na dia mijoro eo ambany ny ranonorana, henoy, henoy ny antso.
Tsy afaka mifantoka amin'ny toe-javatra izay dia mba ho variana, hazoto fo dia nifalihavanja ny gadona: nalahelo antso.
vehivavy hihaona video Mampiaraka izao tontolo izao amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy plus fiarahana tsy misy fisoratana anarana Fiarahana tsy misy sary amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy manambady vehivavy te-hihaona video Mampiaraka online no fisoratana anarana maimaim-poana video mpivady Mampiaraka Mampiaraka online